Indlela yokuSebenzisa iiNkcukacha zeKhuseleko zeDatha (MSDS)
Iphepha leNgcaciso loKhuseleko lweMpahla (MSDS) luxwebhu olubhaliweyo olunika abasebenzisi bemveliso nabasebenzi bexakeka ngeenkcukacha kunye neenkqubo ezifunekayo zokusingatha nokusebenza neekhemikhali. I-MSDS sele ijikeleze, ngenye indlela okanye enye, ukususela ngexesha lamaYiputa aseYiputa. Nangona iifom ze-MSDS zihluka ngokuthe ngqo phakathi kwamazwe kunye nabalobi (ifomathi ye-MSDS yamazwe ngamazwe ibhalwe kwi-ANSI Standard Z400.1-1993), ngokubanzi zichaze izinto eziphathekayo kunye nemikhemikhali yomkhiqizo, zichaze iingozi ezinobungozi ezinxulumene nenkunkuma (impilo, isilumkiso , ukutshabalalisa, i-radioactivity, reactivity, njl.), misela izenzo ezinxamisekileyo, kwaye zihlala ziquka ukuchongwa komenzi, idilesi, umhla we-MSDS , kunye neenombolo zeefowuni eziphuthumayo.
Kutheni Ndifanele Ndikhathalele Nge-MSDS?
Nangona ii-MSDS zijoliswe kwiindawo zokusebenza kunye nabasebenzi bexakeka, nayiphi na umboleki angazuza ngokufumana ulwazi oluyimfuneko lomkhiqizo. I-MSDS inikeza ulwazi malunga nokugcinwa okufanelekileyo kwezinto, uncedo lokuqala, ukuphendula kwe-spill, ukuchithwa okukhuselekileyo, utyhefu, ukutshabalalisa, kunye nolwazi oluncedo olongezelelweyo. I-MSDS ayigcinelwanga kuma-reagents asetshenziselwa ukhemikhali, kodwa kunikezelwa izinto ezininzi, kubandakanywa iimveliso zentsapho eziqhelekileyo ezifana nezokucoca, i-petroli, i-pesticides, ukutya okunye, iziyobisi, kunye ne-ofisi kunye nezixhobo zesikolo. Ukuqhelanisa ne-MSDS kukuvumela ukuba kuthathwe amanyathelo okuthathwa kwimveliso enobungozi; iimveliso ezikhuselekileyo zinokufumaneka ziqulethe izingozi ezingalindelekanga.
Ndifumanaphi iifayile zeNkcukacha zoKhuseleko?
Kwamazwe amaninzi, abaqeshi kufuneka bagcine ii-MSDs kubasebenzi babo, ngoko indawo enhle yokufumana i-MSDS isemsebenzini. Kwakhona, ezinye iimveliso ezijoliswe ekusebenziseni abathengi zithengiswa nge-MSDS edibeneyo.
Amasebe eKholeji naseyunivesithi aya kugcina ii-MSDS kwiikhemikhali ezininzi . Nangona kunjalo, ukuba ufunda le nqaku ekhompyutheni ngoko unokufikelela lula kumawaka e-MSDS nge-intanethi. Kukho iingqungquthela kwi-MSDS yolwazi oluvela kule sayithi. Iinkampani ezininzi zinama-MSDS kwimveliso yazo efumaneka kwi-intanethi ngewebhu.
Ukususela kwinqanaba le-MSDS kukukwenza ingcaciso yengozi efumanekayo kubaxhasi kwaye ekubeni iikopi ezithandwayo azifaki ukufaka isicelo sokunciphisa ukusasazwa, i-MSDS iyafumaneka ngokubanzi. Amanye ama-MSDS, afana nalawo asebenzisa iziyobisi, angenokuba nzima nakakhulu ukufumana, kodwa ayenokufumaneka kwisicelo.
Ukufumana i-MSDS ngemveliso uza kuyifuna ukwazi igama layo. Amagama athile ngamakhemikhali amaninzi atholakala kwi-MSDS, kodwa ayikho igama elisezantsi elibhalwe ngamagama.
Igama leekhemikhali okanye igama elithile lisetyenziselwa ukufumana i-MSDS kwimiphumo yempilo kunye namanyathelo okukhusela. I-IUPAC (i-International Union ye-Pure ne-Applied Chemistry) imixholo isetyenziswe kaninzi kunegama eliqhelekileyo . Iintetho eziqhelekileyo zihlala zidweliswe kwi-MSDS.
I-molecular formula ingasetyenziselwa ukufumana ikhemikhali yolwakhiwo olwaziwayo.
Uyakwazi ukukhangela inkunkuma usebenzisa i-CAS ( Inombolo ye- Chemical Abstracts Service). Imichiza eyahlukeneyo inokuba negama elifanayo, kodwa elowo liya kuba nenombolo yalo yeCAS.
Ngamanye amaxesha indlela elula yokufumana umveliso kukukhangela ngumenzi .
Imveliso ingafumaneka ngokusebenzisa i- USN yeSebe lezoKhuseleko kwi-NSN . Inombolo kaZwelonke yokuThengisa inombolo yekhowudi yekhowudi yeklasi yeFSC kunye neNombolo yeNombolo yeNombolo yeSizwe okanye iNIIN.
Igama lohwebo okanye igama lomkhiqizo libizwa ngegama , elorhwebo, okanye igama lokuthengisa umenzi wemveliso unikeza umkhiqizo. Ayichazi ukuba zeziphi iikhemikhali ezisemveliso okanye ingaba umveliso ungumxube weekhemikhali okanye enye ikhemikhali.
Igama lohlobo okanye igama lomndeni wekhemikhali lichaza iqela leekhemikhali ezinxulumene nezixhobo eziphathekayo kunye nemikhemikhali. Ngamanye amaxesha i-MSDS iya kubhala kuphela igama eliqhelekileyo lemveliso, nangona emazweni amaninzi imithetho ifuna ukuba amagama eekhemikhali abhalweliswe.
Ndisebenzisa njani i-MSDS?
I-MSDS ibonakala ngathi iyisongelo kunye nobugcisa, kodwa ulwazi alujoliswanga ukuba lunzima ukuluqonda. Unokwenza uphinde uhlole i-MSDS ukubona ukuba kukho naziphi izilumkiso okanye izingozi ezichazwayo. Ukuba umxholo unzima ukuyiqonda kukho iifayile ze-MSDS kwi-intanethi ukulungiselela ukucacisa nayiphi na amagama engaqhelekanga kwaye rhoqo uqhagamshelana nolwazi malunga neenkcazelo ezongezelelweyo.
Ngokufanelekileyo uza kufunda i-MSDS ngaphambi kokuba ufumane umkhiqizo ukuze ukwazi ukulungisa nokugcina kakuhle. Ngokuqhelekileyo, ii-MSDS zifundwa emva kokuba kuthengwe umkhiqizo. Kule meko, unokwazi ukuskena i-MSDS kuyo nayiphi na inqununu yokukhusela, imiphumo yempilo, ukugcina isilumkiso okanye ukulahlwa kwemigaqo. I-MSDS ihlala iluhlu lweempawu ezingabonisa ukutyhila kwimveliso. I-MSDS iyona mithombo egqibeleleyo yokubonisana xa umkhiqizo uphitshisiweyo okanye umntu uye wavelelwa kwimveliso (ingxilongo, inalulweyo, ichithwe esikhumbeni). Imiyalelo kwi-MSDS ayifaki indawo yezobuchwepheshe bezonyango, kodwa ingaba luncedo oluxakekayo kwiimeko. Xa uqhagamshelana ne-MSDS, gcina ukhumbule ukuba izinto ezimbalwa zizinto ezicocekileyo zee-molecules, ngoko umxholo we-MSDS uya kuxhomekeka kumenzi. Ngamanye amazwi, ii-MSDS ezimbini zeekhemikhali ezifanayo zinokuba nolwazi oluhlukileyo, kuxhomekeke ekungcoleni kwento okanye indlela esetyenziselwa ukulungiselela.
Iinkcukacha zeeNkcukacha zoKhuseleko azenziwanga alinganayo. Iingqungquthela, i-MSDS ingabhalwa ngumntu omhle kakhulu (nangona kukho inxaxheba echaphazelekayo), ngoko ke ulwazi luchanekileyo njengoko kubhaliweyo kunye nokuqonda kwedatha. Ngokwe-1997 uphando olwenziwa ngu-OSHA "olunye uphando lwengqungquthela lwengqungquthela olwenziwe ukuba i-11% kuphela ye-MSDS ifunyenwe ichanekileyo kuzo zonke iinkalo ezine ezilandelayo: iziphumo zempilo, uncedo lokuqala, izixhobo zokukhusela, kunye nemida yokuchasana. Idatha yezempilo kwimiphumo ye-MSDS kaninzi ayigqibekanga kwaye idatha engapheliyo ayilunganga okanye ingaphelelanga ngaphaya kwedatha ecacileyo ".
Oku akuthethi ukuba i-MSDS ayinamsebenzi, kodwa ibonisa ukuba ulwazi kufuneka lusetyenziswe ngokuqaphela kwaye ukuba ii-MSDS zifunyenwe kwimithombo ethembekileyo neyithembekileyo. Umgca ophantsi: Hlonipha iikhemikhali ozisebenzisayo. Yazi izingozi zabo kwaye cwangcisa impendulo yakho kwimeko engxamisekileyo ngaphambi kokuba kwenzeke!
Yintoni eyenziwe yiFart?
Yeka Ukukhahla Gesi okanye i-Nitrous Oxide Works
Ngaba kufuneka Ufaka isicelo kwiSikolo soPhumelele kwiSikolo se-GPA ephantsi?
Ukufa nokufa e-Iliad
Yintoni Ubuninzi beHippopho?
IYunivesithi yaseWisconsin-Stevens Point Admissions
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: Insegnare
UJeremy Camp Biography
Yintoni iBogey? Inkcazo (kunye neMimiselo) yeGrade Score
I-Molecular Solid - Inkcazo kunye nemizekelo
Iimpazamo eziqhelekileyo ngesiNgesi: Abancinane - Abambalwa, Abancinci - bambalwa
Izigqibo zeNkundla eziPhakamileyo kwiMfihlo: iGriswold v. Connecticut
Ukuphela kweeLatini Iinkcukacha zeSiqendu sesithathu
Ukuxhaswa Kwentliziyo: Ngaba Ndifanele Ndiyixhase Isisu ngaphakathi okanye ngaphandle?